Ny mpanorina ny Mapar, Rajoelina : « Maro ireo namanamana… raha misy patsa » | NewsMada
Ny mpanorina ny Mapar, Rajoelina : « Maro ireo namanamana… raha misy patsa »
Nifampiarahaba noho ny taona vaovao teny amin’ny trano fonenany eny Ambohimangakely ny filoha mpanorina ny Mapar, Rajoelina ny asabotsy teo. Notsindriny manokana ny momba ireo mpiara-dalana aminy teo aloha. « Maro tokoa ireny namanamana na hoe namana raha misy patsa. Niantso ahy koa izy ireo! Asa maninona, mitsoka mankaiza izany rivotra izany ? Fa hoy aho hoe: andraso eo aloha », hoy izy tamin’ny lahateniny.
Ankoatra izany, nambarany fa maro ireo mifanena aminy ary manganoano, te hitomany raha vao mandray ny tanany. « Hoy aho hoe: fantatro ny tianao holazaina », hoy ihany ny mpanorina ny TGV.
Notsiahiviny koa fa maro ireo miaina ao anatin’ny loto; anaty fako sy ny aizina ary niantso ny amin’ny tokony hamonjena ny firenena sy ny handraisana andraikitra. « Fa ny sasany kosa, aleo aho tsy hiteny. Ianareo no mitsara », hoy Rajoelina.
Anisan’ny niatrika izao lanonana izao ireo avy amin’ny Armada na ny Vondrona Ambodivona teo aloha, nahitana ny avy amin’ny Hiaraka isika, ny Jly Camille Vital, ny Avana, Robinson Jean-Louis, ny Malagasy miara-miainga amin’ny alalan’Andrianainarivelo Hajo ary Rabeharisoa Sahara G.
Tonga maro ireo olom-boafidy Mapar : ben’ny Tanàna, depiote, loholona sy ireo mpanakanto.